सिभिल बैंकको एजीएमबाट मर्जरको अजेण्डा पास, लाभांश पनि स्वीकृत Bizshala -
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडको एघारौं वार्षिक साधारण सभा पुस ३० गते शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
सो साधारण सभाबाट संचालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम बैंकको चुक्तापूँजीको ५ प्रतिशतबराबरको बोनस शेयर तथा कर प्रयोजनको लागि प्रतिशेयर ०.२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न सर्वसम्मतिले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
साथै सभाले आ.व. २०७८/०७९ को लेखापरिक्षण गर्नको लागि “एन.बि.एस.एम.एण्ड एशोसियट्सलाई लेखापरिक्षकमा पुनः नियुक्त गर्नुका साथै सिभिल बैंक लिमिटेड र अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिन (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने/हुने वा स्वदेशी÷विदेशी रणनीतिक साझेदारीमा जान आवश्यक सहमति र सम्झौता गर्ने लगायत प्रचलित नियम, कानून अनुसार बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिभिल बैंकले आधुनिक प्रबिधियुक्त बैंकिङ्ग सेवा तथा सुबिधामा विशेष ध्यान दिंदै ग्राहकसेवालाई निरन्तर रुपमा चुस्त दुरुस्त र सुरक्षित बनाउँदै लैजाने योजना रहेको बैंकले जनाएको छ ।
करिब पाँच लाखभन्दा बढी ग्राहकहरुलाई ११५ शाखाहरु, १० एक्सटेन्सन काउन्टरहरु तथा ८७ एटिएम मार्पmत सेवा प्रदान गरिरहेको सिभिल बैंकले रु. ९१ अर्व भन्दा बढी निक्षेप परिचालन गरी रु. ८७ अर्व भन्दा बढी कर्जा लगानी गरिसकेकोे छ ।
civil bank limited AGM
एनआइसी एशियाको डेपुटी सीइओ बने राठी
काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अ�...
बजेटमा सिविफिनको सुझाव : बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने,
काठमाण्डौ । नेपालमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता...
नबिल बैंकको विशेष सभाबाट एनबी प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित,
काठमाण्डौ । अदालतमा परेको रिट फिर्ता भएसँगै नबिल बैंक लिमिटेड र...
अधिकांश बैंकले सीडी रेसियो घटाउन सकेनन्, प्राइमको झण्डै ९९%
काठमाण्डौ । तरलता अभावको समस्यामा चमात्कारिक सुधारको कुनै...
बैंकहरुले लगातार २ दिनभन्दा बढी सार्वजनिक विदा दिन नपाउने !
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दशैं र तिहारका सार्वजनिक...
हिमालयन बैंकले सिभिललाई अक्वायर गर्ने सम्भावना, बैशाखभित्रै
काठमाण्डौ । जारी छलफलहरुमा कुनै अप्रत्यासित अवरोध भएन भने बैशाख...
राष्ट्रबैंकको सम्मान थापेपछि तिलक रावलको प्रश्न-'२४
-अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ । राष्ट्र बैंकको ६७ औँ वार्षिकोत्सवका...
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र अझै केही समय डामाडोल नै रहने,